Kunoma iyiphi ingxenye kocingo liyisici esisemqoka. Isixazululo elilungile kungase kubhekwe njengokwelapha ukwakhiwa uthango kusuka impahla ezifana ibhodi lukathayela, ngoba akudingeki uchithe esiningi imali nokuzikhandla. Kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi ibhodi lukathayela - uhlobo olufanayo lwezinto ezibonakalayo. Futhi ukuthi kukhawulela imibono design. Kodwa kusukela uhlobo olufanayo kulondoloza ibanga elikhulu imibala, esiza ukulingana kahle ocingweni kunoma iyiphi landscape. Futhi uma ukukhweza kahle kocingo of lukathayela, kungaba iminyaka engaphezu kwengu-30. Ngakho, indlela yokwakha kocingo ebhodi lukathayela ngezandla zakho?
Ukwakhiwa kocingo ngezandla kulokhu kwaziswa ngaphansi amandla ngamunye. Assembly kanye ukufakwa kungenziwa kalula wedwa. Ukuze ukuxazulula inkinga "indlela yokwakha kocingo ebhodi lukathayela ngezandla zakhe," sidinga bollards ipayipi lensimbi, mncane ububanzi amapayipi imigoqo kanye ngqo ofanele ngobukhulu impahla. Ukuze ukubophela amashidi, futhi kudingeka sokuprakthiza nezikulufi kuphela.
Isisekelo - isisekelo kocingo. Futhi uma unquma ukufunda indlela yokwakha kocingo ebhodi lukathayela, abese ekhohlwa yiso Akufanele uzizwe zinkulu. It wavela kuye kuzoncika ngamandla wonke isakhiwo idalwa. ukwakhiwa kwalo kufanele ithathwe ngendlela nengxenye enkulu wemfanelo. Uma kungenjalo, ngeke ajabulela inkonzo nokuphila lifushane kakhulu ocingweni lwakho. Kuyaqondakala ukuthi nzima impahla izokhetheka ukufaka kocingo, namandla kumele isisekelo.
Isinyathelo esilandelayo senqubo icala njengoba kokufaka kocingo ebhodi lukathayela ngezandla zakhe, ukudala yomdwebo for ukwakhiwa esizayo. Ngenxa yalesi okhandwe ngesando ku nezikhonkwane phansi. Khona-ke therebetween welulela Twine enamandla kakhulu noma ngocingo. Ngemva kumele mba nomsele, ububanzi okuyinto okungukuthi cishe 40 cm phezu yonke indawo lapho isisekelo kuyoba losendzaweni. Kuyadingeka zezinsika do emgodini ububanzi ngo 40 cm mayelana ezintathu amamitha kusuka komunye nomunye. Kuzo zombili izinhlangothi emseleni at emaphethelweni liyadingeka ukubeka formwork of izingodo lokhuni. Ukuze amandla kwesisekelo selibekiwe emseleni, ashiselwe nokufakwa steel. Ngemva kwalokhu, uthele ukhonkolo.
Uma ukugcwalisa isixazululo kuyodingeka ukulinda isikhathi esithile ngaphambi kokuthi yome ngokuphelele. Lokhu izothatha cishe phakathi neviki elilodwa. Uma isizinda ibhalwe, ungakwazi ukuya esigabeni sokugcina ngokuxazulula inkinga "indlela yokwakha kocingo yezandla lukathayela siqu." Uzodinga uqale ukusetha amashidi. Basuke zigxilé metal okhethekile prozhiliny. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukushisela amaphayiphi a ngomumo izingongolo phezulu futhi phansi. Ibanga phakathi bangakwenzi kakhulu. Kungenjalo profiled ehle. Ngemva ipayipi kufanele ashiselwe, kubalulekile ukuqala amashidi abethela. Lokhu kumele kwenziwe ngosizo ngezikulufo. Ibanga phakathi okunamathiselwe izinhlelo akufanele esingaphansi amabili ngamasentimitha.
Lo mbuzo, "indlela Yakha kocingo of lukathayela siqu izandla" kungase kubhekwe njengokwelapha ukucabangela. Inhlanhla kuwe ekudalweni kocingo!
Isiphanyeko izingubo ngezandla zabo: izinto, incazelo umsebenzi
Amakhoba izandla siqu: indlela yokwenza
Umuthi 'sintomitsinovoy wamafutha. imfundo
25 Emaviki abakhulelwe
Motor futha umlilo: izici kudivayisi. Nazi izinhlobo umlilo motor amaphampu
Iziphi izilwandle ezigeza iRussia? Sibutsetelo
U-Amidala uyinkosikazi evela ezimpini zenkanyezi. Kwenzekani ku-Princess Amidala?
Olubonisa amakhoma lapho uvula ayebatshele zona
Amaqiniso ethakazelisayo nokuphila Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart: Biography
Bonisa "Indlu 2"
Pancake wenza kusuka ufulawa nokunye okufana nokolweni: zokupheka. pancake Buckwheat nge kefir noma imbiliso